6 ulwandiso olutsha kwiifoto zeMacOS ePhakamileyo yeSierra | Ndisuka mac
6 ulwandiso olutsha kwiifoto zeMacOS ePhakamileyo yeSierra
UJavier Porcar | | Mac App Store, Ezahlukeneyo
Ukusukela kwiinguqulelo zangaphambili ze-macOS, abahleli bezithombe banokubandakanya iinguqulelo ezincitshisiweyo kwizandiso zeefoto zecandelo le-Mac.Oko kukuthi, kwi-interface yeefoto zeApple, sinokufaka naluphi na uhlobo lokuphinda kulungiswe okanye lokucoca ulwelo esinalo kumhleli wezithombe.ifoto yenziwe ngayo. Kuyinyani ukuba ulwandiso lweeFoto lwalufika ngamaconsi, kodwa ingxelo eqinisekileyo yeMacOS ePhakamileyo yeSierra, iza nezinto ezintsha ezimbalwa. Siza kubona ezi-4 zazo: IWhiteWall, Iifoto zeMimeo, iiGoodTimes, iMpix Photo Prints, Shutterstock kunye neWix.
Eyokuqala, WhiteWall, isivumela ukuba sigqibe ukufota ngokungathi yayixhonywe eludongeni okanye eludongeni. Isivumela ukuba sikhethe iintlobo zezakhelo kunye neefoto zemontage, okanye ukugqiba ifoto enye ecaleni kwenye.
Usebenzisa amandla eefoto zeApple, iWhiteWall ikuvumela ukuba ujonge imifanekiso yakho exhomekeke eludongeni. Yila eyakho itemplate yokuprinta eyokukhethwa kwimifanekiso oyithandayo. Kuqala, thatha isigqibo sokuba uyafuna ukushicilelwa, ukushicilelwa okunyusiweyo, okanye iiprinta eziyiliweyo.
Emva koko tshintsha imifanekiso, uyibeke kwakhona eludongeni olubonakalayo, utshintshe ubungakanani bayo, kwaye ubalime njengoko ubona kufanelekile. Nje ukuba ukhethe imifanekiso kunye nolungiselelo olufunayo, ungenza utshintsho kukhetho olukhulayo okanye lokuyila olukhethileyo. Unazo izakhelo zemveli, unokukhetha kunye nobungakanani bemethi ukuze ilingane nefoto yakho. Emva koko, konke okufunekayo kukucofa nje okumbalwa kwaye iinkumbulo zakho ziya kwiWhiteWall kwimveliso ephumelele amabhaso.
Ungalanda IWallWall, ukusuka kwiVenkile yeMac Apple.
Isicelo sesibini ngu Iifoto zeMimeo. Ngenye indlela kwiifoto zee-Mac ezongeziweyo zokwenza ikhalenda, amakhadi okanye ii-albhamu. Nje ukuba ugqibile, unoku-odola umsebenzi kwilebhu yefoto ngokuthe ngqo.
Iifoto zeMimeo lulwandiso olutsha olunamandla lokwenza iifoto, amakhadi, kunye neekhalenda ngaphakathi kweefoto zeMacOS ePhakamileyo yeSierra.
Emva kokufaka usetyenziso kwiVenkile yeApple yeMac, qala ngokundwendwela iiProjekthi zam kwaye ukhethe iifoto zeMimeo kwimenyu ehlayo. Ngoku unokukhetha kuluhlu olubanzi lweemveliso zokuprinta zepremiyamu.
Iifoto zeMimeo zibonelela ngemixholo ebanzi yemixholo ngalo lonke ixesha. Khetha eyona ifanelekileyo kwiprojekthi yakho, okanye uqale ekuqaleni.
Ukukhuphela Iifoto zeMimeo ngqo kwiVenkile yeMac Apple.
Ulwandiso lwesithathu lubizwa Amaxesha amnandi. Yenza iikholaji ezikumgangatho ophezulu kunye nokuchaneka kwemifanekiso. Sithetha malunga neapps ehlaziywa rhoqo, ke iindaba zihlala zikhona.
Yenza ubuchule ngamaGoodTimes. Ude usebenzise i-GoodTimes awunakucinga ngempembelelo enokuthi ibekho ngokulula. Nangona kunjalo, i-GoodTimes sisicelo esinamandla ngokumangalisayo: ubude obugxile, uyilo oluchanekileyo lwe-3D ngexesha lokwenyani, iziphumo ezifanelekileyo kunye nezakhelo, ukuhlela ngokuchanekileyo. Kwaye ukuba akunjalo, buza abathengi bethu abaqeqeshiweyo.
Amaxesha amnandi Ixabiso li- € 21,99 kwi-Mac App Store.
Isicelo sesine siyabizwa Ukuprintwa kweefoto zeMpix.
Sisicelo esivumela ukuba sibone umphumo wokufota kwi-acrylic, isakhelo somthi, ngesinyithi emacaleni, kunye noseto oluninzi. Wakuba umsebenzi ugqityiwe, uthunyelwa elebhu ukuwufumana kwisithuba seeyure ezimbalwa.
Singalanda Ukuprintwa kweefoto zeMpixngqo kwiVenkile yeApple yeMac
Siya kulwandiso lwesihlanu, olubizwa njalo Ibhabhathane. Ukongezwa kweefoto ze-macOS kubizwa Shutterstock. Ngayo sinokwenza iialbham zeefoto kwimizuzu nje embalwa. Ukufikelela kwiifoto ezingama-200 onokuzongeza kwiprojekthi nganye.
Guqula ngokulula iifoto zakho kwiincwadi ezintle zeefoto ngemizuzu. Iincwadi zeShutterfly Photo ziifoto zokwandiswa kwe-macOS ekuvumela ukuba ukhethe iifoto, iinkumbulo, okanye iialbham kwaye uzibeke kwincwadi yemifanekiso. Unokukhetha kwiindidi ezahlukeneyo, uyilo, kunye noyilo lokwenza ngale ndlela ufuna ngayo.
Unokuzikhuphelela usetyenziso Shutterstock mahhala.
Ulwandiso lwesithandathu nolokugqibela, ufumana igama lika Lungisa. Ifana neMimeo Iifoto, ikuvumela ukuba wenze iialbham zeefoto ngobuninzi bezitayile. Esi sicelo songeza umsebenzi wokwabelana ngomsebenzi wethu kwinethiwekhi yoluntu okanye siyithumele kusapho nakubahlobo.
Yenza iialbham zeefoto ezintle ezikwi-Intanethi ngokuthe ngqo kwiThala leeNcwadi elikwiMic.I-albhamu nganye kulula ukuyilungisa ukuze uyibone ngendlela ofuna ngayo. Isimahla.
Ungathumela ngokulula i-albhamu yakho eyoyikisayo ye-intanethi kusapho nakwizihlobo njengekhonkco ekwabelwana ngalo.
Wix, unakho oku kulandelayo unxibelelwano.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » 6 ulwandiso olutsha kwiifoto zeMacOS ePhakamileyo yeSierra
Ndikhuphele usetyenziso lweefoto zeMimeo kwaye ndizamile ukwenza ikhalenda kodwa ngesiNgesi. Andifumani ndlela yokuyiguqulela kwisiCatalan njengoko inokwenziwa ngaphambili ngesicelo seefoto kwiMac.
Yenza amakhadi eshishini oqobo ngokulula ngamakhadi oshishino we-GN
I-beta yokuqala ye-tvOS 11.1 ngoku iyafumaneka kubaphuhlisi